महाभारतमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै दुई वडा ‘सिल’ गरीयो – Radio Roshi
महाभारतमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै दुई वडा ‘सिल’ गरीयो
in रोशी खबर / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	July 21, 2020
जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित भेटिए पछि दुई वडा सिल गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ गोकुलेकी ५१ बर्षीय महिला कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले एक सूचना जारी गर्दै वडामा आवत जावत बन्द गरिएको बताए ।
सिल गरिएको वडामा वडा नम्बर १ र ८ रहेको छ । सूचनामा ‘यस गाउँपालिका वडा नं. १ गोकुले निवासी एक व्यक्तिको पिसिआर परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको बुझिएको हुनाले यस गाउँपालिका वडा नं. १ र ८ को चकमके, थिङटोल, सेपा, डबली, आकुरा, मैनडाँडामा बसोबास गर्ने जनसमुदायहरुलाई संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी उच्च सतर्कता राखी आवतजावत नगर्न र अन्य व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाउन जरुरी भएको हुँदा उक्त कार्य गर्न।गराउन हुन अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनिएको छ ।
संक्रमित ब्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरुको स्वाव संकलनका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले जानकारी दिए । स्थानिय भने समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने त्रासमा रहेका छन् । गाउँवासीलाई त्रसीत नभई सुरक्षी रहन अध्यक्ष जिम्बालेआग्रह गरे ।
संक्रमित महिलालाई रिपोर्ट नआई घर पठाईएको थियोः
गोकुलेकी ५१ बर्षीय महिला असारको अन्तिम हप्ता पाठेघरको उपचारका लागि पाटन अस्पताल पुगीन् । पाटन अस्पतालमा स्वाब संकलन गरिएको भए पनि कोरोना रिपोर्ट बिना नै असार २९ गते स्वाब संकलनपछि अस्पतालले घर पठाएको थियो । असार ३० गते घर पुगेकी महिलाले धेरै आफन्त सँग भेटघाट गरीन् तर पछि उनमा कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट आएपछि गाउँ नै संक्रमित भएको स्थानियले आसंका गरेका छन् । संक्रमित महिला बिदेशबाट आएकी पनि होईनन् । उनि घरमा नै बस्दै आएकि थिईन् ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाका अनुसार ती महिलाको सम्पर्कमा आएका १६ जना पहिचान भइसकेको र ती सबैलाई चिकित्सकको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेका छन् । संक्रमित महिलालाई भने असार ३१ गते नै टेकु अस्पताल उपचारका लागि पठाइसकेको अध्यक्ष जिम्बाले जानकारी दिए ।